ओली नरम हुँदा नेपाल कडा - samayapost.com
समयपोष्ट २०७८ साउन ९ गते ६:५८
ओलीले जारी केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा पार्टी एकता बचाइराख्न वरिष्ठ नेता नेपाललाई दोस्रो अध्यक्ष बनाउन तयार रहेको बताएका थिए। त्यसको प्रतिक्रियास्वरुप बिहीबार नेपालले आफू कुनै प्रलोभनमा नपर्ने बताए। त्यसपछि शुक्रबार नेपालले ओलीको आम माफीको अभिव्यक्तिप्रति प्रतिक्रिया दिँदै भने, ‘हिजो महामहिम श्री ५ महाराजाधिराजबाट अभिव्यक्ति आयो, माधव नेपाललगायत माननीय सदस्यहरू जतिलाई स्पष्टीकरण सोधिएको छ, उनीहरूलाई आममाफी दिइन्छ। महाराजाधिराज बोल्नुभएको छ। हामी गदगद भयौं। हाम्रा महाराजाधिराज कति खुसी भएछन्, हामीलाई आम माफी दिएछन्, नाच्नुपर्ने भो, खुसी हुनुपर्ने भो।’ नेपालले ओलीप्रति व्यंग्य गर्दै थपे, ‘यही हो कम्युनिस्ट प्रवृत्ति ? स्पष्टीकरण सोध्नु गल्ती भयो, मैले हतार गरें, त्यो मैले फिर्ता लिएको छु भन्दिएको भए के हाइट घट्थ्यो ? मर्यादा कम हुन्थ्यो ?’
असार २७ गते राति एमाले विवाद निरुपणका लागि बनेको कार्यदलका सदस्यले तयार पारेको १० बुँदे सहमति प्रस्तावमा नेता नेपालले असहमति रहेको जनाउ दिएका थिए। प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिने अवस्थासम्म आइपुग्दा आफूले कार्यदलमा पठाएका सदस्यहरूको आग्रहलाई समेत नेपालले अस्वीकार गर्दै आए। उता ओलीले पनि बालकोट पुगेर नेपाललाई पार्टीमा कुनै स्थान नभएको र लाल गद्दार घोषणा गरेर १० बुँदे सहमति कार्यान्वयन नहुने संकेत गरेका थिए। यसबीचमा ओली पक्षले बाँदर जुलुस निकाल्ने र नेपालको पुतला जलाउनेसम्मको काम गरेपछि नेपाल पक्षबाट अखिल फोर्स, पिपुल्स भोलेन्टियर्स बनाउनेजस्ता काम भए।आजको नागरिक दैनिकमा यो समाचार छ ।